Ubuntu ဆိုတာဘာလဲ? - Zomi Computer and Internet Association
Home / Linux / Ubuntu ဆိုတာဘာလဲ?
Taang Sianpu January 13, 2011 Linux
Ubuntu ဆိုတာဘာလဲ? Ubuntu ဆိုတာ Linux distro တစ်ခုပါ Linux distro ပေါင်းများစွာအနက်အသုံးအများဆုံး Linux distro ဟာ ubuntu ဖြစ်ပါတယ် သို့ သော် ubuntu ကို အကောင်းဆုံး linux distro လို့ တော့ပြောလို့ မရပါဘူး အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Linux distro တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုထုတ်လုပ်ရသော ရည်ရွယ်ချက်များ မတူညီကြသဖြင့် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်ရန်ခက်ခဲပါသည်။ ubuntu သည် မူလ Debian distribution ကိုပြန်ကာ develop လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ payment ဖြင့်သုံးရသော် Linux OS ကို distribution ဟုခေါ်ပြီး free ရသော Linux OS ကို distro ဟုခေါ်သည်။ သာမန် window user များအနေနဲ့Linux ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလို ပါက အခက်အခဲအနည်းဆုံးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော OS မှာ ubuntu ဖြစ်သည်။ ubuntu တွင် Desktop Environment သုံးခုရှိသည်။